के हो नेकपाको स्कुल विभाग, कसको किन छ दाबी? :: Setopati
के हो नेकपाको स्कुल विभाग, कसको किन छ दाबी?
स्कुल विभागका दुई दाबेदार पोखरेल र श्रेष्ठ। फाइल तस्बिर।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र यतिबेला स्कुल विभागको नेतृत्वमा हानथाप छ। हिमाल चढ्न हिँडेको आरोहीको जुत्तामा ढुंगा छिरेजस्तो स्कुल विभागको नेतृत्व विवादले पार्टीको एकता प्रक्रिया नै टुंगो लाग्न सकेको छैन।
नेकपामा चार जनाले स्कुल विभागको नेतृत्व दाबी गरिरहेका छन्। पूर्व एमाले तर्फबाट सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल, स्थायी समिति सदस्य बेदुराम भुषाल र घनश्याम भुषालले दाबी गरिरहेका छन् भने पूर्व माओवादी तर्फबाट सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ आकांक्षी छन्।
यी नेताहरूको दाबीबारे चर्चा गर्नुअघि सबभन्दा पहिला नेकपाको स्कुल विभाग के हो भन्ने नै बुझौं।
कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आफ्नो विचार र सिद्धान्तलाई तल्लो तहसम्म फैलाउन 'स्कुल विभाग' गठन गर्ने गर्छन्। त्यसैमार्फत् पार्टीका विचार र सिद्धान्तबारे कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षण दिइन्छ। पार्टीमा स्कुल विभागबाहेक अन्य कुनै नेताले भेला वा प्रशिक्षण डाके, त्यसलाई पार्टी विभाजनको बीउका रूपमा व्याख्या गरिन्छ।
एकताअघि एमालेमा स्कुल विभागको नेतृत्व अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै गरिरहेका थिए। उपप्रमुख शंकर पोखरेल थिए।
तत्कालीन एमालेको स्कुल विभागले च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा एक साता लामो सशुल्क कक्षा सञ्चालन गर्थ्यो। जसमा १८ वटा विषयवस्तु पढाइन्थ्यो। नेकपाका स्थायी समिति सदस्य बेदुराम भुषालका अनुसार 'पार्टीले पाठ्यक्रम टुंगो लगाउँथ्यो र त्यस्तो पाठ्यक्रमअनुसार पढाउन प्रशिक्षक तोकिएका हुन्थे।’
पूर्वएमालेमा मोदनाथ प्रश्रितले लामो समय स्कुल विभागको नेतृत्व गरेका थिए। उनैले पाठ्यक्रम बनाउने र प्रशिक्षण दिने कामको सुरुआत गरेका थिए।
'प्रश्रितले नेतृत्व गर्दा स्कुल विभाग क्रियाशील थियो,’ भुषाल भन्छन्, 'स्कुल विभाग पार्टीका अन्य विभागजस्तै हो। नेतृत्व सक्रिय भए विभाग सक्रिय हुने हो।’
बेदुरामले पनि पूर्वएमालेमा साढे चार वर्ष विभागको नेतृत्व गरेका थिए। पूर्व एमालेका माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, केपी शर्मा ओलीलाई पनि स्कुल विभाग सञ्चालन गरेको अनुभव छ।
'स्कुल विभाग भनेको पार्टीको नीति, विचार र सिद्धान्तलाई कार्यक्रममार्फत् वैचारिक प्रशिक्षण दिने विभाग हो,' बेदुराम भन्छन्, 'यसले पार्टीको विचार र सिद्धान्तलाई कार्यकर्ताहरूसम्म पुर्याउँछ।’
त्यसो भए पार्टीको सिद्धान्तबारे कार्यकर्ताहरूलाई 'दीक्षित' बनाउने यो विभागको नेतृत्वमा नेताहरूको किन यस्तो हानथाप? अब यसबारे चर्चा गरौं।
नेकपाभित्र पूर्व एमालेलाई स्कुल विभागको जिम्मेवारी दिए जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) अगाडि बढाउने भय पूर्व माओवादीलाई छ। नेकपाको राजनीतिक दस्तावेजमै 'जनताको बहुदलीय जनवाद' नभनेर 'जनताको जनवाद' भनिएको छ। पूर्व एमालेका नेताहरू भने माओवादीले जबजको नीति सिद्धान्तत: स्वीकार गरेर पनि जबज शब्द नरुचाएकोमा असन्तुष्ट छन्।
आपसमा यत्ति विश्वास नहुँदा नै स्कुल विभागको नेतृत्वमा यत्रोविधि हानथाप भएको नेताहरू बताउँछन्।
स्थायी समिति सदस्य बेदुराम भुषाल यस्तो तानातानीको कुनै अर्थ नभएको टिप्पणी गर्छन्।
'विभागमा ३५ सदस्य हुन्छन्। पाठ्यक्रम विभागले पारित गर्नुपर्छ। त्यसमाथि प्रदेशमा पनि विभाग हुन्छन्। जिल्लासँग समन्वय नगरी कार्यक्रम गर्न मिल्दैन,' भुषाल भन्छन्, 'नेताले गएर आफ्नो मनलाग्दी भाषण गर्ने ठाउँ स्कुल विभाग होइन। मनलाग्दी भएको अवस्थामा नेतृत्वले हस्तक्षेप गर्न सक्छ।’
उनका अनुसार स्कुल विभागबाट नेतृत्वलाई मिल्ने एक मात्र फाइदा भनेको कार्यकर्तासँग सम्पर्क र समन्वयमा सहजता हो।
'स्कुल विभाग मात्र होइन, अन्य विभागले पनि अन्तर्क्रिया र छलफल गर्न सक्ने बाटो खुल्ला रहेकोतर्फ ध्यान गएको देखिँदैन,' भुषाल भन्छन्, 'फलानोले जिम्मा पाए एउटा सिद्धान्त पढाइने, अर्काले जिम्मा पाए अर्को थोक पढाइने हैन।’
एकताअघि पूर्व माओवादीमा स्कुल विभागको जिम्मेवारी नारायणकाजी श्रेष्ठले गरिरहेका थिए। तर, माओवादीको स्कुल विभाग एमालेको जस्तो सक्रिय थिएन।
नेकपाको नियमावलीले नै पार्टीका सिद्धान्त, कार्यक्रम र नीतिअनुरूप स्कुल विभाग सञ्चालन गर्ने भनेको छ। यसअनुसार कार्ययोजना बनाउने, वैचारिक स्तर उठाउन काम गर्ने, प्रशिक्षक तथा विशेषज्ञ तयार पार्ने काम विभागको हुनेछ।
त्यस्तै, पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने, प्रकाशन गर्ने, परीक्षा लिने तथा प्रमाणपत्र दिने काम पनि विभागले गर्न सक्ने नियमावलीमा छ। स्कुल विभागले विदेशका स्कुल विभागहरूसँग पनि समन्वयमा काम गर्न सक्ने प्रावधान छ।
स्कुल विभाग के हो, नेतृत्वमा पुग्ने हानथाप किन भइरहेको छ भन्ने चर्चापछि अब हामी नेतृत्व दाबीको कुरा गरौं।
नेकपा स्कुल विभागमा अहिले मुख्यतया दुई जनाको दाबी छ- ईश्वर पोखरेल र नारायणकाजी श्रेष्ठ। यी दुवै सचिवालय सदस्य हुन्।
नारायणकाजी यतिबेला न सरकारमा छन् न त सांसद। नेकपाको सचिवालयमा भएका नौ नेतामध्ये वामदेव गौतम र नारायणकाजी मात्र राजकीय जिम्मेवारीमा छैनन्।
श्रेष्ठ निकट एक नेताका अनुसार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सचिवालय बैठकमा नारायणकाजीलाई स्कुल विभागको जिम्मेवारी दिन प्रस्ताव गरेका थिए।
'अहिले पार्टीको दस्तावेज सैद्धान्तिक र राजनीतिक पाटो नारायणकाजीले लेख्नुभएको हो। माधव नेपालको संयोजकत्वमा राजनीतिक दस्तावेज बनाउन उहाँको भूमिका छ,' श्रेष्ठ निकट एक नेता भन्छन्, 'संगठन विभाग वामदेवले पाउने भएपछि सचिवालयमा भएका र मन्त्री नभएका नाताले नारायणकाजीले पाउनु स्वाभाविक हुन्छ।’
अर्का आकांक्षी ईश्वर पोखरेलले पार्टीको दस्तावेजमा 'जबज' नलेखिएको भन्दै छपाइ नै रोकेकाले स्कुल विभागको नेतृत्व दिन नहुने पूर्व माओवादी पक्षका नेताको भनाइ छ।
नेता पोखरेलले भने आफूलाई स्कुल विभागको जिम्मेवारी दिन नखोज्नुको कारण अध्यक्ष केपी ओलीमाथिको घेराबन्दीका रूपमा बुझेका छन्।
आफू विगतमा पार्टी महासचिव रहेको र अहिले हटाइएको अवस्थामा स्कुल विभागमा स्वाभाविक आफ्नो दाबी हुने उनी तर्क गर्दै आएका छन्।
'नारायणकाजीले प्रवक्ताको जिम्मेवारी राम्रोसँग चलाउन सक्नुभएको छैन,' पोखरेल निकट एक नेताले भने, 'केपी ओलीको पखेटा काट्ने उद्देश्यले ईश्वर पोखरेललाई नदिन खोजिएको हो।’
मदन भण्डारीको 'जनताको बहुदलीय जनवाद' (जबज) मान्छौं भनेर माओवादीले स्वीकार गरेको, तर अहिले जबज शब्दमै कुरा अड्किएको ती नेताले बताए।
नेकपामा जबजमै विद्यावारिधि गरेका बेदुराम भुषाल र मार्क्सवादी स्कुल सञ्चालन गर्दै आएका घनश्याम भुषालको पनि सचिवालयमा दाबी रहँदै आएको छ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन ११, २०७६, १२:५४:००